ကလေးများအတွက် Motrin သောက်သုံးသောပုံစံ၊ တစ်ယောက်တည်း - မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း | ဇန္နဝါရီလ 2022
ကုမ္ပဏီသတင်း ကုမ္ပဏီ, အဆိုပါကုန်ပစ္စည်း သတင်း ကျန်းမာရေး ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ဆီးဂိမ်း သတင်း၊ ကျန်းမာရေးပညာရေး ရပ်ရွာ နှိပ်ပါ ဆေးပညာသတင်း, ကျန်းမာရေးပညာရေး အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီ ဖျော်ဖြေရေး ကုန်ပစ္စည်း
အဓိက >> မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း >> ကလေးများ Motrin သောက်သုံးသော, ပုံစံများနှင့်အားသာချက်
ကလေးများ Motrin သောက်သုံးသော, ပုံစံများနှင့်အားသာချက်
ပုံစံများနှင့်အားသာချက်များ | ကလေးများ Motrin သောက်သုံးသောဇယား | ကလေးများ Motrin သောက်သုံးသောကန့်သတ် | ကလေးများ Motrin ယူမှဘယ်လို | မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
Children's Motrin (တက်ကြွစွာပါဝင်သည့်ဆေးပစ္စည်း - ibuprofen) သည်အမှတ်တံဆိပ်ကျော်လွန်။ ရနိုင်သောဆေးဖြစ်သည်။ ဖျားခြင်း။ ကိုယ်ပူခြင်း သို့မဟုတ်ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ သွားကိုက်ခြင်း၊ နားကိုက်ခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ အအေးမိခြင်းသို့မဟုတ်တုပ်ကွေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအသေးအမွှားနာကျင်ခြင်းနှင့်နာကျင်ခြင်းများသို့မဟုတ်ကလေးသူငယ် Motrin အားအသက် ၂ နှစ်မှ ၁၁ နှစ်ကြားကလေးများအတွက်သင့်လျော်သည့်ဆေးများဖြင့်ဖော်စပ်ထားသည်။
Children's Motrin သည်ရောဂါလက္ခဏာများကိုသက်သာစေသည့်ဆေးဖြစ်သည်။ ၎င်းရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်မည်သည့်နောက်ခံကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုမဆိုကုသရန်မရည်ရွယ်ပါ။ ကလေးငယ်များအတွက် Motrin ကိုပါးစပ်ဖြင့်အရသာရှိသောဝါးစားဆေး (သို့) ပါးစပ်ဆိုင်းထိန်း (အရည်) အဖြစ်ယူသည်။ ဒါဟာအစားအစာနှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ပါတယ်။
သက်ဆိုင်သော: Children's Motrin ဆိုတာဘာလဲ။ | သားသမီးရဲ့ Motrin ကူပွန်
ကလေးများ Motrin ပုံစံများနှင့်အားသာချက်များ
Children's Motrin ကိုဝါးစားနိုင်သောတက်ဘလက်သို့မဟုတ်ပါးစပ်ဖြင့်ဆိုင်းငံ့ထားနိုင်သည်။
ဝါးတက်ဘလက်များ: ဆေးတစ်ဘူးလျှင် ၁၀၀ မီလီဂရမ် (mg) Ibuprofen စပျစ်သီးအရသာနှင့်ဆိုးဆေးကင်းသောစပျစ်သီးအရသာရှိသည်
ခံတွင်းရပ်ဆိုင်းမှု -5milliliters per mg (ml) bubble gum, စပျစ်သီး၊ berry သီး၊ ဆိုးဆေးမပါသောအရသာရှိနိုင်သည်
ကလေးသူငယ် Motrin ခံတွင်းဆိုင်းငံ့မှုသည်ဆေးပမာဏမှန်ကန်စွာတိုင်းတာရန်အတွက်အမှတ်အသားခြောက်ချက်ပါသည့် ၁၅ မီလီမီတာခွက်ပါရှိသည်။
ကလေးများ Motrin သောက်သုံးသောဇယား
Children's Motrin သည်အရွယ်ရောက်ပြီးဖြစ်သောအစွမ်းသတ္တိဖြစ်သော Motrin (200 mg) ၏ဆေး၏ထက်ဝက် (100 mg) ပါဝင်ပြီးအသက် ၂ နှစ်မှ ၁၁ နှစ်ကြားကလေးများအတွက်သင့်တော်သည်။ အသက် ၂ နှစ်အောက်ကလေးများကိုပေးနိုင်ပါသည် Motrin မွေးကင်းစ '' ကျဆင်းမှု သို့မဟုတ်ယေဘုယျ မွေးကင်းစ '' ibuprofen ။ Ibuprofen မွေးကင်းစကလေးငယ်များသည် ပို၍ မြင့်မားသောအာရုံစူးစိုက်မှုရှိပြီးဆေးဝါးပြွတ်စက်သို့မဟုတ်ဆေးရည်နှင့်အလွန်သေးငယ်သောဆေးများဖြင့်ပေးသည်။
စောင့်ရှောက်သူများသည် Motrin ၏ Children's အကြံပြုထားသည့်ဆေးထက်ပိုမပေးသင့်ပါ။ ၂၄ နာရီတစ်ကြိမ်တည်းတွင်ဆေးလေးကြိမ်ထက် ပို၍ မပေးပါနှင့်။
ဆေးကိုအလေးချိန်နှင့်အသက်အရွယ်အရဆုံးဖြတ်သည်၊ သို့သော်အလေးချိန်ကို အခြေခံ၍ ဆေးထိုးခြင်းကို ဦး စားပေးသည်။ ကလေး၏အလေးချိန်မသိသောမှသာအသက်အရွယ်အားဖြင့်ဆေးထိုးပါ။
အလေးချိန်နှင့်အသက်အရွယ်အားဖြင့်ကလေးများ Motrin သောက်သုံးသော
အလေးချိန် အသက် အကြံပြုသောက်သုံးသော (ဆေးပြား) အကြံပြုသောက်သုံးသော (အရည်) အများဆုံးသောက်သုံးသော
<24 lb <2 yrs ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူကိုမေးပါ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူကိုမေးပါ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူကိုမေးပါ
24-35 ပေါင် 2-3 နှစ် ၆-၈ နာရီတိုင်းတစ်ဘူး (၁၀၀ မီလီဂရမ်) ၁ လုံး 6-8 နာရီတိုင်း5ml (100 mg) ၂၄ နာရီအတွင်း4ဆေးသို့မဟုတ် 20 ml (400 mg)
36-47 ပေါင် 4-5 နှစ် 6-8 နာရီတိုင်း 1 every ဆေးပြား (150 mg) 6-8 နာရီတိုင်း 7.5 ml (150 mg) ၂၄ နာရီအတွင်းဆေးပြား ၆ လုံးသို့မဟုတ် ၃၀ ml (၆၀၀ မီလီဂရမ်)
48-59 ပေါင် 6-8 yrs ၆-၈ နာရီတိုင်းတွင်ဆေးပြား ၂ လုံး (200 mg) 6-8 နာရီတိုင်း 10 ml (200 mg) ၂၄ နာရီအတွင်း ၈ ပြားသို့မဟုတ် ၄၀ ml (၈၀၀ မီလီဂရမ်)
60-71 ပေါင် 9-10 yrs 6-8 နာရီတိုင်း2every ဆေးပြား (250 mg) 6-8 နာရီတိုင်း 12.5 ml (250 mg) ၂၄ နာရီအတွင်း ၁၀ ပြားသို့မဟုတ် ၅၀ ml (၁၀၀၀ မီလီဂရမ်)
72-95 ပေါင် ၁၁ နှစ် ၆-၈ နာရီတိုင်းဆေးပြား ၃ လုံး (၃၀၀ မီလီဂရမ်) ခန့် 6-8 နာရီတိုင်း 15 ml (300 mg) ၂၄ နာရီအတွင်းဆေးပြား ၁၂ လုံးသို့မဟုတ် ၆၀ မီလီမီတာ (1200 mg)
ကလေးများ Motrin သောက်သုံးသောကန့်သတ်
ကလေးငယ်များအတွက် Motrin သည်အအေးမိခြင်း၊ တုပ်ကွေး၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ သွားကိုက်ခြင်း၊ လည်ချောင်းနာသည် အသက် ၂ နှစ်မှ ၁၁ နှစ်အကြားကလေးငယ်များအားသွေးဖြန်းခြင်း၊
ကလေးသူငယ် Motrin တွင်အသက်အရွယ်ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။ ၎င်းကိုမွေးကင်းစကလေးများ၊ မြီးကောင်ပေါက်များ၊ လူကြီးများကိုပေးနိုင်ပါသည်။ သို့သော်ထုတ်ကုန်သည်အသက် ၂ နှစ်မှ ၁၁ နှစ်ကြားကလေးများ မှလွဲ၍ အခြားသူများအတွက်လမ်းညွှန်ချက်များသို့မဟုတ်လုံးဝသတိပေးချက်များမပါ ၀ င်ပါ။ ထုတ်လုပ်သူ အကြံပြုသည် အသက်အရွယ် - သင့်လျော်သောညွှန်ကြားချက်နှင့်အတူသင့်လျော်သောမွေးကင်းစသို့မဟုတ်အရွယ်ရောက် Motrin ထုတ်ကုန်ငယ်ကလေးများသို့မဟုတ်လူကြီးများအတွက်အသုံးပြုကြောင်း။
အသည်းနှင့်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာပြproblemsနာများရှိသောကလေးငယ်အား Motrin ကလေးမပေးမီကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူကိုအမြဲတမ်းမေးမြန်းပါ။ ဆေးထိုးရန်ပြောင်းလဲရန်လိုကောင်းလိုလိမ့်မည်။
30-60 ml / min ၏ Creatinine clearance: သတိဖြင့်အသုံးပြုပါ
30 မီလီမီတာ / မိနစ်အောက်လျော့ချနိုင်သော Creatinine ရှင်းလင်းချက် - မသုံးပါနှင့်
အသည်းရောဂါလူနာများ : မသုံးပါနဲ့
အကယ်၍ ကလေးရှိပါကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူ၏ညွှန်ကြားမှုအောက်တွင်မှ လွဲ၍ ကလေးများအား Motrin မပေးရ။
ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်း (၀ မ်းလျှောခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း၊ အရည်များများမသောက်ခြင်းကြောင့်)
Ibuprofen, naproxen, သို့မဟုတ် Aspirin ကိုဓာတ်မတည့်ခြင်း
ကလေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူကညွှန်ကြားချက်မရှိပါကကလေးသည်သွေးဖြန်းဆေးများ၊ Diuretics ဆီးဆေးများသို့မဟုတ် Aspirin သို့မဟုတ် naproxen ကဲ့သို့သောအခြား NSAIDs များသောက်နေလျှင်ကလေးများအား Motrin မပေးပါနှင့်။
ကလေးများအား Motrin အားကလေးများအားမည်သို့ပေးရမည်နည်း
ကလေးများ၏ Motrin ကိုဝါးစားနိုင်သောဆေးပြားသို့မဟုတ်ပါးစပ်ဖြင့်ဆိုင်းထိန်း (အရည်) အဖြစ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ပါးစပ်ဆိုင်းထိန်းစနစ်သည်ဆေးဖလားနှင့်ပါလာသည်။ ခွက်ပေါ်ရှိအမှတ်အသားများသည်အကြံပြုထားသောဆေးခြောက်ချောင်းစီကိုဖော်ပြသည်။ 2.5 ml,5ml, 7.5 ml, 10 ml, 12.5 ml နှင့် 15 ml ။ ကလေးသူငယ် Motrin ကိုကလေးအားပေးသည့်အခါအောက်ပါလုံခြုံမှုနှင့်ထိရောက်မှုဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များကိုသုံးသပ်ပါ။
ကလေးအား Motrin မပေးမီလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်သတိပေးချက်များကိုဖတ်ပါ။
ကလေးအားပေးသောအခြားဆေးဝါးများကိုစစ်ဆေးပါ။ သူတို့မှာ ibuprofen, aspirin, or naproxen မပါ ၀ င်ပါစေနဲ့။
ကလေးသူငယ် Motrin ခံတွင်းဆိုင်းငံ့မှုကိုစီမံသည့်အခါဆေးမထည့်မီပုလင်းကိုကောင်းစွာလှုပ်ပါ။ ဆေး၏တက်ကြွသောအစိတ်အပိုင်းသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအောက်ခြေအထိကျသွားနိုင်သည်။
မှန်ကန်သောဆေးကိုဆုံးဖြတ်ရန်အသက်အရွယ်ထက်ကလေး၏အလေးချိန်ကိုသုံးပါ။ အကယ်၍ ကလေး၏အလေးချိန်ကိုမသိပါကကလေးများအား Motrin မပေးမီကလေးကိုချိန်ပါ။
ဆေးပမာဏကိုတိကျစွာတိုင်းတာရန်တိုင်းတာခြင်းဖလားသို့မဟုတ်တိုင်းတာသည့်ဆေးထိုးအပ်ကိုအမြဲအသုံးပြုပါ။ မီးဖိုချောင်ဇွန်းကဲ့သို့သောမည်သည့်စက်ကိရိယာမျိုးကိုမျှမသုံးပါနှင့်။ အကယ်၍ ဆေးခွက်ပျောက်သွားလျှင်ဆေးဆိုင်သည်ဆေးသောက်ရန်ခွက်သို့မဟုတ်ဆေးထိုးပြနိုင်သည်။
ဝါးစားသည့်တက်ဘလက်များသည်၎င်းတို့မျိုချမိပါကရင်ပူလာခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဆေးကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာဖြတ်သန်းနိုင်ရန်ဆေးပြားကိုသောက်ပြီးနောက်မိနစ် ၁၅-၃၀ မိနစ်ခန့်ထိုင်။ နေပါ။
၂၄ နာရီတစ်ကြိမ်တည်းတွင်ဆေးလေးကြိမ်ထက် ပို၍ မပေးပါနှင့်။
ကလေးများ Motrin သောက်သုံးသော FAQs
ကလေးများအတွက် Motrin အလုပ်လုပ်ရန်ဘယ်လောက်ကြာမလဲ?
ဝါးစားနိုင်သောတက်ဘလက် (သို့) အရည်အဖြစ်မှတ်ယူထားသော ibuprofen (တက်ကြွစွာပါဝင်သည့်အရာ) သည်ခန္ဓာကိုယ်ကအလျင်အမြန်စုပ်ယူနိုင်သည်။ Children's Motrin ၏ဆိုးကျိုးများကိုစတင်သင့်သည် 15 မှ 30 မိနစ်ခန့် ဆေးပြီးနောက်မျိုဖြစ်ပါတယ်။ Ibuprofen သည်တစ်နာရီမှနှစ်နာရီအတွင်းထိရောက်မှုအမြင့်ဆုံးသို့ရောက်ရှိသော်လည်း၎င်းသည်နှောင့်နှေးနိုင်သည် မိနစ် 30 မှ 60 မိနစ်အားဖွငျ့ဖွစျသညျ ကလေးများ Motrin အစားအစာနှင့်အတူယူလျှင်။ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းအမြင့်ဆုံးပမာဏသည် ibuprofen ကိုအစာနှင့်စားသုံးသောအခါ ၃၀% မှ ၆၀% အထိပိုမိုနိမ့်သော်လည်းအစာအိမ်စိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်အောင်ကာကွယ်ရန်လိုအပ်သည်။
ကလေး၏ Motrin သည်ကလေး၏စနစ်တွင်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးနေရမည်နည်း။
အကြံပြုထားသောသောက်သုံးသောအချိန်၌ကလေးများ၏ Motrin ၏သက်ရောက်မှုသည်ကလေးတစ် ဦး တွင်လေးနာရီမှခြောက်နာရီခန့်ကြာသော်လည်းကြာချိန်ရှစ်နာရီအထိကြာနိုင်သည်။ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်ကလေးများ Motrin ဆေးများကိုခြောက်နာရီမှရှစ်နာရီတိုင်းပေးပြီးအရွယ်ရောက်သူအများစုသည်လေးနာရီမှရှစ်နာရီတိုင်း Ibuprofen ကိုသောက်နိုင်သည်။
ဆရာဝန်များ၊ ဆေးဝါးနှင့်အခြားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများသည် Children's Motrin ကဲ့သို့သောမူးယစ်ဆေးဝါးများသည်ဝက်ဘဝတစ် ၀ က်တွင်မည်မျှကြာအောင်နေထိုင်သည်ကိုတိုင်းတာသည်။ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်မှမူးယစ်ဆေးတစ်ဝက်ကိုဖယ်ရှားရန်ကိုယ်ခန္ဓာမည်မျှကြာသည်ကိုတိုင်းတာသည်။ ibuprofen ၏ထက်ဝက်သည်နှစ်နာရီခန့်ကြာသော်လည်း၊ ဆေးကိုအကြံပြုထားသောဆေးများဖြင့်အန္တရာယ်ကင်းစွာပေးရရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ကလေးများအတွက် Motrin ဆေးထိုးခြင်းကိုလက်လွတ်ပါကဘာဖြစ်မည်နည်း။
Children's Motrin သည်ရောဂါလက္ခဏာများကိုသက်သာစေသည့်ဆေးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။ ၎င်းသည်အခြေခံကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုမကုသပါ။ အဆိုးဆုံးအနေဖြင့်ဆေးတစ်ကြိမ်သောက်ပါကနာကျင်ခြင်းနှင့်အဖျားပြန်ခြင်းစသည့်လက္ခဏာများဖြစ်သည်။ သို့ဆိုလျှင်၊ ဆေးပမာဏသည်လွဲချော်လျှင်သို့မဟုတ်နောက်ကျပါကစောင့်ဆိုင်းရန်မလိုအပ်ပါ။ လွဲချော်သောဆေးကိုသင်မှတ်မိသည်နှင့်ချက်ချင်းပေးပါ။ သို့သော်အနည်းဆုံးခြောက်နာရီကြာသည်အထိနောက်ထပ်ဆေးကိုမပေးကြောင်းသေချာပါစေ။
ငါကလေး၏ Motrin ယူပြီးရပ်တန့်သလဲ?
မည်သည့် NSAID ကဲ့သို့ပင်, ကလေးများ Motrin အကောင်းဆုံးမှာအသုံးပြုသည် အနိမ့်ဆုံးဆေးထိုးဖြစ်နိုင်သည် သာနေသမျှကာလပတ်လုံးရောဂါလက္ခဏာတွေရှိနေဆဲအဖြစ်။ NSAIDs များသည် Children's Motrin ကဲ့သို့ကြီးမားသောဆေးများသို့မဟုတ်အချိန်ကြာမြင့်စွာမသုံးသင့်ပါ။ ရောဂါလက္ခဏာများပိုမိုဆိုးရွားလာပါကသို့မဟုတ်တိုးတက်မှုမရှိသေးပါကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်ပြောဆိုပါ။ ကလေးသည်ပထမ ၂၄ နာရီအတွင်းအချို့သောလက္ခဏာများကိုသက်သာစေသင့်သည်။ ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းအသုံးပြုပါကကလေး၏ Motrin ကိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသို့မဟုတ်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများမပါဘဲလုံခြုံစွာရပ်တန့်နိုင်သည်။
ကလေးတစ် ဦး ကိုတစ်လလျှင် ၁၅ ရက်သို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုသောကလေးများအား Motrin ဆေးပေးနေလျှင်ဆေးကုသမှုခံယူပါ။ ပိုမိုသင့်လျော်သောဆေးကိုညွှန်းနိုင်သည်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူသည်ကလေးသူငယ် Motrin ကိုရပ်ရန်အကြံဥာဏ်ပေးနိုင်သည်။
ရှားရှားပါးပါးကိစ္စများတွင် Children's Motrin သည်အဖုအပိန့်ထွက်ခြင်း၊ ဤသို့ဖြစ်လျှင်ဆေးသောက်ခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းပြီးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူကိုချက်ချင်းဆက်သွယ်ပါ။
ကလေးများ Motrin အစားဘာကိုအသုံးပြုနိုင်သလဲ
Ibuprofen, ကလေးများ Motrin အတွက်တက်ကြွစွာဆေးဝါးယေဘုယျအားဖြင့်လုံခြုံသည်။ အလားတူဆေးဝါးများ၊ Aspirin နှင့် naproxen ကဲ့သို့သောဆေးများကိုဆေးဝါးများအနေဖြင့်လည်းရရှိနိုင်သည်။ ဤဆေးဝါးများ၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာဆင်တူသည်၊ ထို့ကြောင့်ကလေးတစ် ဦး သည်ကလေးများ Motrin နှင့်ပြproblemsနာကြုံတွေ့ရပါကအလုံခြုံဆုံးနည်းလမ်းမှာ acetaminophen ဖြစ်နိုင်သည်။ Children's Tylenol သည်အသက် ၃ နှစ်မှ ၁၁ နှစ်ကြားကလေးများအတွက် acetaminophen ထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။
ကလေးများ Motrin အတွက်အများဆုံးသောက်သုံးသောပမာဏကဘာလဲ။
ကလေးများအတွက်အများဆုံး ibuprofen သောက်သုံးမှုသည်ကလေး၏အလေးချိန်ပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ စောင့်ရှောက်သူများအနေဖြင့်အများဆုံးနေ့စဉ်သောက်သုံးသောပမာဏထက်မပိုစေရန်၊ အကြံပြုထားသည့်တစ် ဦး ချင်းသောက်သုံးခြင်းထက်မပိုရန်သို့မဟုတ် ၆ နာရီထက်နည်းသောဆေးများကိုမပေးရရန်ဂရုစိုက်သင့်သည်။ ကလေး၏အလေးချိန်နှင့်အသက်ပေါ် မူတည်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်အထက်ပါဆေးညွှန်းဇယားကိုကြည့်ပါ။
အဘယ်အရာသည်ကလေးများ Motrin နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်?
Ibuprofen သည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့လျင်မြန်စွာစုပ်ယူနိုင်ပြီးအစာမပါသည့်အခါတွင်ပိုမိုထိရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ သို့သော်ဗိုက်ဗိုက်ဗိုက်ကိုသုံးသောအခါ ibuprofen သည်အစာအိမ်ကိုစိတ်ဆိုးစေနိုင်သည်သို့မဟုတ်နာကျင်စေသည်။ စောင့်ရှောက်သူများအနေဖြင့်အစာအိမ်ပြproblemsနာများကိုကာကွယ်ရန်ကလေးများအား Motrin ကိုအစားအစာ ပေး၍ ရွေးချယ်သည်။
နာကျင်မှုသက်သာစေသည့်အနေဖြင့် ibuprofen ၏ထိရောက်မှုကိုလျော့နည်းစေသည့်ကလေးငယ်များအတွက်များသောအားဖြင့်ဆေးဝါးအနည်းငယ်သာသတ်မှတ်လေ့ရှိသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူဆိုဒါနှင့်စွမ်းအင်သောက်သုံးမှုများတွင်ပါဝင်သောကဖိန်းဓာတ်သည်ဖြစ်နိုင်သည် နာကျင်မှုကိုသက်သာစေသောဂုဏ်သတ္တိများတိုးပွားစေပါသည် အထူးသဖြင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့် Ibuprofen ၏။ ကဖိန်းဓာတ်ပါ ၀ င်သည့်အချိုရည်များကိုကလေးများအားလုံး ၀ သတိထားသင့်သည်။
အားလုံးသောမူးယစ်ဆေးဝါးများကဲ့သို့ပင်ကလေးများ Motrin သည်အချို့သောဆေးဝါးများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်လိမ့်မည် စောင့်ရှောက်သူများအနေဖြင့်ကလေးတစ် ဦး ကိုတစ် ဦး ထက်မပိုသော (သို့) ဆေးညွှန်းပေးသည့်ဆေးဝါးတစ်ခုထက် ပို၍ ပေးသည့်အခါဆေးကုသမှုခံယူသင့်သည်။
Aspirin၊ naproxen သို့မဟုတ်အခြား NSAIDs များပါသည့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ကလေးသူငယ် Motrin ကိုမပေးပါနှင့်။ ဤသည်အစာအိမ်သွေးထွက်ခြင်းနှင့်အနာအန္တရာယ်မြင့်တက်နှင့်သွေးခဲဖွဲ့စည်းရန်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုနှောင့်ယှက်။ NSAID ဆေးများသည်များလွန်းလျှင်သွေးထွက်ခြင်း၊
တူညီသောအကြောင်းပြချက်တစ်ခုအနေဖြင့်၊ ကလေးငယ်သည်သွေးဖြန်းဆေးများသောက်ခြင်း၊ သွေးထွက်ခြင်းပြhasနာများရှိပါကသို့မဟုတ်စိတ်ကျဝေဒနာနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုကုသရန်အတွက် serotonin ပြန်လည်သောက်သုံးမှုတားစီးသူများ (SSRIs) ကိုသောက်သုံးပါကကလေးများ၏ Motrin ကိုရှောင်ရှားသင့်သည်။ သွေးထွက်စေသည့်ဆေးဝါးများအပြင် များစွာသောအစားအသောက်သို့မဟုတ်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များသည် anticoagulant ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည် နှင့်ကလေးများ Motrin နှင့်အတူအသုံးပြုမရသင့်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ထုတ်လုပ်သူကကလေးများ Motrin ကို corticosteroids နှင့် hydrocortisone တို့နှင့်မပေါင်းသင့်ကြောင်းသတိပေးသည်။ fluticasone ။ ပေါင်းစပ်ခြင်းသည်အန္တရာယ်ကိုတိုးစေသည် ibuprofen ရဲ့အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ။
ကလေးများ Motrin , Epocrates
ကလေးများ Motrin ဝါး Ibuprofen ဆေးပြားများ ဂျွန်ဆင် & ဂျွန်ဆင်
Motrin (ibuprofen) ဆိုင်းငံ့ဆေး 100 mg /5ml ဆေးလမ်းညွှန် , FDA က
ibuprofen ၏ဆေးဝါးဗေဒ၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် , အိုမန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဂျာနယ်
ဆိုးရွားသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးတုန့်ပြန်မှုနှင့်ဆေးဝါးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအပြန်အလှန်ထိတွေ့မှု NSAIDs , ကုထုံးနှင့်လက်တွေ့အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု
erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုရှာဖွေခြင်း - စမ်းသပ်မှုများနှင့်နောက်အဆင့်များ
codeine နှင့်အတူ tylenol3၏လမ်းတန်ဖိုး
၂၄ နာရီအတွင်း planbဘယ်လိုကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်သလဲ